Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Safarka iyo Dalxiiska Indonesia: Warbixinta Saameynta COVID
Jebinta Wararka Caalamka • Warshadaha Warshadaha • Indho Indho Indoneesiya • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Saamaynta COVID-19 ee Indonesia
Xaaladda warshadaha Dalxiiska iyo Dalxiiska ayaa 46.6 boqolkiiba ku yareeyay GDP-ga Indonesia intii u dhaxeysay 2019 iyo 2020 sababtuna tahay COVID-19.
Indonesia ayaa lumisay 1,377,200 shaqo tan iyo markii uu dillaacay cudurka faafa ee COVID-19, oo markii ugu horreysay la helay bishii Diseembar 2019, oo u dhiganta in ka badan 10 boqolkiiba.
Sannadka 2019, 13,180,400 shaqooyin safar iyo dalxiis ayaa gacan ka geystay dhaqaalaha Indonesia.
Waxtarka Gross Domestic Product (GDP) ee qaybta dalxiiska ee Indonesia ayaa ka kacay 5.9 boqolkiiba ilaa 3.2 boqolkiiba min 2019 ilaa 2020.
Saamaynta booqdaha caalamiga ah ee kharashka wuxuu ka yimid US $ 259.817 bilyan illaa US $ 56,083.1 bilyan, oo ah 78.4 boqolkiiba khasaaro laga soo bilaabo 2019 ilaa 2020. Saamaynta booqdaha gudaha ee kharashaadku wuxuu ka yimid US $ 313.698 bilyan illaa US $ 203.298 bilyan ama boqolkiiba 35.2 boqolkiiba. Tirooyinka isbarbardhigaya kharashaadka gudaha waxay ahaayeen 55 boqolkiiba sannadka 2019 iyo 78 boqolkiiba sannadka 2020. Kharashka caalamiga ah wuxuu ahaa 45 boqolkiiba sannadka 2019 iyo 22 boqolkiiba sannadka 2020.
Suuqa safarka firaaqada ayaa kor u kacay si uu u muujiyo boqolkiiba 5 kharash badan oo safarrada firaaqada ah Indonesia.
5 -ta qof ee ugu sarreysa ee soo galay Indonesia sannadka 2020 waxay ahaayeen:
- Malaysia: 25 boqolkiiba
- Shiinaha: boqolkiiba 18
- Singapore: boqolkiiba 15
- Australia: 6 boqolkiiba
- Hindiya: 6 boqolkiiba
5 -ta suuq ee ugu sarreysa dibadda oo dadka ka yimid Indonesia ay jecel yihiin inay u safraan waa:
- Malaysia: 46 boqolkiiba
- Singapore: boqolkiiba 16
- Sacuudi Carabiya: 8 boqolkiiba
- Thailand: 5 boqolkiiba
- Japan: 4 boqolkiiba